मेरो जागिर गए जाओस तर गुन्डागर्दी बन्द गरेर देखाउछु: एआईजी जयबहादुर चन्द(अन्तर्वार्ता) | Sidha News
मेरो जागिर गए जाओस तर गुन्डागर्दी बन्द गरेर देखाउछु: एआईजी जयबहादुर चन्द(अन्तर्वार्ता)
POSTED ON : August 30, 2017, IN : Interview
काठमाडौँ : महानगरीय प्रहरी कार्यालय (मेट्रो) रानीपोखरीको जिम्मेवारी पाएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) जयबहादुर चन्दले शुक्रबार पदभार ग्रहण गरेका छन् । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा सम्पूर्ण प्रहरी युनिटको कमाण्डिङ रानीपोखरीस्थित कार्यालयबाट चन्दले सम्हालेका हुन् । यसक्रममा उनले प्रहरीमाथि जनताको भरोसा र विश्वास बढाउन र संगठन सुधारका लागि आफ्ना महत्वाकांक्षी योजनाहरू पनि सार्वजनिक गरेका छन् । आईजीपीमा नियुक्त भई अदालतको आदेशका कारण फूली लगाउन नपाउँदा आफूलाई कम्प्रमाइज गरी एआईजीमा चित्त बुझाई मेट्रोको कमाण्ड सम्हालेका चन्दसँग आगामी योजना, प्रहरी–जनताको सम्बन्ध सुधार र उपत्यकाको शान्ति सुरक्षाको विषयमा कमलराज भट्टले गरेको कुराकानी अंशः
तपाई आईजीपी नियुक्त भइसकेको अफिसर, एआईजी बनेर महानगरीय प्रहरी कार्यालयको कमाण्ड सम्हाल्दा कस्तो लागिरहेको छ ?
यसको धेरै गहिराईमा ब्याख्या गर्नुभन्दा परिस्थितीसँग तादाम्य गर्ने हो मान्छेले । परिस्थितीसँग तालमेल मिलाउनुको विकल्प के छ र ! जीवन चलाउनुपर्छ । जुन परिस्थिती आयो त्यो सँग फेस गर्ने । त्यति हो यसमा धेरै सोचेर आफै दुःखी हुने कुरा छैन् ।
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर हेर्ने महानगरीय प्रहरी कार्यालयको कमाण्ड सम्हाल्नुभयो । विकृति, दलाली, अपराध, गुण्डागर्दीको दबदबा छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न के छन् तपाईका योजना ?
म आज मात्रै आएको छु र करिब लामो समयदेखि गृह मन्त्रालयमा हाजिर लगाइरहेको थिए । फर्केर आएको छु । आज मैले प्रारम्भिक विफ्रिङ गरे । संगठन प्रमुखको निर्देशन पनि लिए । गृहमन्त्रीज्यूको निर्देशन पनि लिए । त्यसपछि मैले मातहतको सबै इञ्चार्जहरुलाई विफ्रिङ गरेको छु । काठमाडौं उपत्यकाको मैले पहिला एसएसपी चलाइसकेको हुनाले थोरबहुत यहाँको अपराधिक गतिविधि, यहाँको विकृति, विसंगति र असामाजिक व्यक्तिका बारेमा मलाई जानकारी पनि छ । र, हामीले टार्गेट गर्नुपर्ने हो, त्यस्ता क्रियाकलापमाथि अब धावा बोल्नुछ । हाम्रो पहिलो मिसन त्यो हो । र, त्यो धावा बोल्ने कुरामा एउटा सारथीको रुपमा आफ्नो मातहतको अधिकारीहरुलाई म अगाडि बढाउँछु । त्यसैगरी काठमाडौं अर्काे पोलुटेड भाको छ । हरेक विकृति, विसंगति, ठगी, लुटपाट, विभिन्न धन्दा छन् । त्यो नियन्त्रण गर्ने को हो त ? गर्ने त पुलिसले नै हो त त्यसमा पनि बकाइदा धावा बोलिन्छ ।
टोलमा हुने गुण्डागर्दीदेखि लिएर टोले गुण्डादेखि नेशनल लेभलको गुण्डाहरुमाथि कारवाही गर्नुस्, धावा बोल्नुस् । त्यसैगरी तपाई कुनै पनि कुरा गर्नुस्, जीवन चलाउनका लागि खेतबारी बेचेर विदेश जान्छु भनेर न विदेश जान पाएको हुन्छ, न पैसा फिर्ता पाएको छ । त्यसको देश नेपाल होइन्, त्यसलाई न्याय हामीले दिनुपर्ने होइन्, त्यस्ता ठगीको धन्दा गर्नेहरुसँग एकदमै म लडाइँ गरेर अगाडि बढ्छु ।
त्यसैगरी प्रहरी कर्मचारीले जनमैत्री प्रहरी सेवा, चाँहे त्यो भक्तपुरको एसपी होस्, चाँहे काठमाडौंको एसएसपी होस्, चाँहे त्यो पाटनको एसएसपी होस्, दुर दराजको मान्छे सिधै आफ्नो कुरा राख्न पाओस् भन्नका लागि मैले गेटमा हात समातेर कसलाई भेट्न आएको हो, उसकहाँ लैजाने आजैदेखि व्यवस्था गरेको छु । हात समातेर । नमस्ते गर्ने, हजुर के कामले आउनुभएको हो ? म यो कामले, ल आउनुस् हजुर भनेर अली परिपक्व बुढो मान्छे छ भने हात समात्नु नभए सँगसँगै लगेर सम्बन्धीत अधिकारी र फाँटमा लगेर पुर्याउनु ताकी मान्छेहरु ए पुलिसमा ठूलो परिवर्तन भएछ, पुलिस हामी दुरदराजका गाउँका मान्छेको पो रहेछ भन्ने भावनाको विकास तुरुन्तै जनतामा हुनुपर्छ ।
त्यसैगरी बोली बचन । ‘जिब्रोको गरिमा मिठो बोलीमा’ म जहाँ जहाँ गए त्यहाँ भनिराख्या छु । जिब्रो खानामा मात्रै यसको गरिमा हुँदैन्, स्वाद लिनमा मात्रै यसको गरिमा हुँदैन् । यसको गरिमा बोलीमा छ । मिठो बोल्ने मान्छेलाई सारा दुनियाले मन पराउछ, यो मन्त्र हो । सोसाइटीका हरेक मान्छेसँग मिठो बोल्नुपर्छ । आजै मैले रिक्सा चालकलाई नमस्ते गर्न नहुने किन हामीले ? के हाम्रो हात खस्छ ? के हाम्रो डिभ्यालुसन हुन्छ ? नमस्ते गर्ने । ए रिक्सा, ए ट्याक्सी भनेर एउटा हुकुमी शैलीमा जुन बोलिराछन् त्यो सामन्ती सोचभन्दा बाहिर पुलिस हुनुपर्छ ।
त्यसपछि काठमाडौंको हुने अपराध । अपराध अनुसन्धान आफै एउटा जटिल विषय हो । यस्तो कुनै किसिमको त्रुटी हुनुहुँदैन् र व्यवसायिक अफिसरहरु यसमा खटिनुपर्छ । अपराध अनुसन्धान दुरुस्त भयो, अपराध अनुसन्धान मात्र दुरुस्त भएर मात्र भएन, अपराध गरिराहछन् मान्छेहरु स्कुलिङको पनि अभाव छ । अन्तक्रिया, अभिमुखीकरण, बस्ती भेटघाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र अपराध नगर्नेतिर मान्छेलाई प्रोत्साहित गर्ने अर्काे एउटा तरिका हो ।
तपाईले सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख हुँदा बस्ती भेटघाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो । त्यसको दुरदराजका जनतामाँझ राम्रो प्रभाव परेको थियो । उपत्यकामा पनि यस्तो खालको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुनै योजना छ ?
पहिला काठमाडौं एसएसपी हुँदा पनि गरेको थिए । वीरगञ्जमा पनि गरेको थिए । अब पनि गर्छु । यो त गर्नु जरुरी छ । जनताको गुनासो मातहतका निकायबाट आउने गर्छ, तर तपाईले सुदूरपश्चिममा वस्ती भेटघाट गर्दा मेरो नम्बर यति हो, समस्या पर्यो भने मलाई नै सम्पर्क गर्नुस् भन्ने एउटा राम्रो संस्कारको विकास भएको थियो, त्यो अझै महत्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ । केछ तपाईको धारणा ? मैले आजै भन्दिसक्या छु । मैले मेरो नम्बर माग्यो कन्ट्रोललाई भने नम्बर दिन आनाकानी गर्ने, म सार्वजनिक मान्छे हो, काठमाडौंको हरेक बासिन्दालाई, बाहिरको मान्छेलाई पनि मेरो नम्बर पाउने अधिकार छ । भक्तपुरको एसपीको नम्बर कति हो भने पख्नुस् भनेर डायरी पल्टाउँछ । कमसेकम ८–१० वटा नम्बर कन्ट्रोलमा बस्नेले याद गर्नुपर्यो नी । कोही आपत विपतमा परिराहोला । हतारमा होला । अनी ५ मिनेट फोन नम्बर खोज्नमै लाग्यो भने व्यवसायिकता हुन्छ ? यो सबै मैले स्पष्ट निर्देशन दिएको छु । चुस्त दुरुस्त सेवा प्रभावकारी हुनुपर्छ । ताकी दुरदराज गाउँ बसेको मान्छे पनि मेरो घरमा एकजना पुलिस छ भन्ने सम्झिओस् । पुलिस त्यहाँ छैन भने पनि पुलिसको त्यहाँ उपस्थिती छ भन्ने महसुस हुनुपर्छ । त्यही हिसाबको मैले निर्देशन गरेको छु ।
प्राय: समस्या परेका व्यक्तिहरु प्रहरीकहाँ आउछन्, त्यस्ता व्यक्तिहरुको तथ्यांक संकलनको अवस्था के छ ?
विल्कुल सुनवाई हुन्छ । त्यस्ता प्रकृतिका अपराधिक घटनाको पीडा कसैले भोगिराख्या छ भने त्यसका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्रको प्रहरी सेवा गर्न एकदम आतुर छ । म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु । कोही मान्छे चाँहिदैन् सिधै आउ समस्या लिएर, हामी त्यसैका लागि बसिरहेका छौं । हाम्रो मुल जिम्मेवारी नै त्यही हो । शान्ति सुरक्षा र जनतालाई राहत दिने आहतमा परेका जनतालाई राहत दिने । यो पुलिसको मुल कर्तव्य पनि हो । पुलिसले धेरै आर्दशवादी बन्नु पनि जरुरी छैनन नी । पीडामा परेका मान्छेलाई हामीले मलह्म लगाउने हो । हाम्रो विषय होइन भनेपनि हामीले बाटो देखाइदिनुपर्छ । हाम्रो जिम्मेवारीभित्र परेन भने कहाँ हो त्यो बताइदिने शिष्ट र सभ्य भाषामा ताकि ए जानुपर्ने यहाँ रहेछ म यहाँ आए तर पुलिसले यो सेवा दियो मलाई कि मलाई बाटो बताइदियो भन्ने होस् ।
जस्तो गुनासोहरु प्रहरी अधिकारमार्फत आउछ कि सोझै तपाईसँग ?
म एक्लैले सक्ने कुरा भएन् । सम्बन्धीत चौकीलाई निर्देशन भइसकेको छ । सम्पूर्ण युनिट जति काठमाडौं छन् त्यो असईसम्मको युनिटहरुलाई आएर हरेक मान्छेलाई इज्जतपूर्वक सार्वभौमसत्ता देशको सार्वभौमसत्ता जनताको छोरो वा छोरी भन्ने सम्मानका साथ त्यहाँ सुनुवाई हुन्छ । सुनुवाई भएन भने त्यो कुरा मसँग आयो भने ठाउँको ठाउँ कारवाही हुन्छ ।
प्रहरी कहाँ पनि न्याय ठिलो पाइएको भन्ने गुनासो छ, अब पीडित व्यक्तिहरुलाई न्याय चाँही मिल्ला नी ?
पुलिसकहाँ जाँदाखेरी पहिला त मान्छे लगेर जानुपर्छ । मान्छे लगेपछि कहाँ गर्ने, के गर्ने खोज्दै हिड्नुपर्यो । मैले के भन्या छु भने आजैका दिनदेखि गेटमा ‘हजुर नमस्कार, के कामले पाल्नुभयो, म चाँही एउटा निवदेन छ यो बुझाउनुपर्ने’ भनेपछि तुरुन्त हात समातेर लगेर मुद्दासम्बन्धी हो भने मुद्दा, चालचलन सम्बन्धी हो सम्बन्धीत फाँटमा लिएर उहाँको काम गरिदिनुस् । कुनै कन्फुजनै छैन् । काम हुने भए यो कारणले हुन्छ तुरुन्त गरिदिने, नहुने भए बाटो देखाइदिने ।
काठमाडौंमा जग्गा दलाली र म्यानपावरको नै बढी समस्या छ नी ?
यो मात्रै होइन् कुनै पनि ठाउँ, पुलिसको जुरिडिक्सनभित्र पर्ने कुनै पनि काममा हामी ढिलासुस्ती पनि गर्दैनौं । त्यो ह्यांकीफ्यांकी जवाफ हुँदैन्, स्पष्ट जवाफ दिन्छौं । स्पष्ट गाइडेन्स हुन्छ ।
तपाईले देख्नुभएको काठमाडौंको प्रमुख समस्या के हो ? एक, दुई तीन नम्बरमा ।
एउटा त हिडन प्रबोलम (नदेखिएका समस्याहरु) थुप्रै छन् । जस्तो गुण्डाहरु भित्रभित्रै आफ्नै साम्राज्य चलाइरहेका छन् । झगडा मिलाइदिने, लेनदेन मिलाइदिने, ठेक्कापट्टा मिलाउने, यस्तो पनि हुन्छ र कहीं ? सबै राज्यको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ के । न्याय इन्साफले गर्ने त्यो भनेको के ? त्यो पक्ष न्याय हो नी भनेको मानिनस भने तेरो हातको औला काटिदिन्छु, साँच्चै काटिदिन्छ की विगतमा अरुको काटिदिएको थियो, मान्छे लफडामा पर्न चाहन्न् । दुई चार लाख, एद दई लाख, १०–२० लाखका लागि आफ्नो जिन्दगी दुःखी बनाउन चाहन्न् । सम्झौता गरिराछ । यो हिडन रुपमा हुने अपराहरु । रेष्टुरेन्टहरुमा, व्यवसायहरुमा विभिन्न धन्दा छन् । यी सबै हिडन अपराधहरु एउटा समस्याको रुपमा छन् ।
अर्काे सीनरुपमा, थरीथरीका दलालीहरु काठमाडौंमा छन् । बौद्धिक दलालीदेखि लिएर सबै किसिमका दलाली । अर्काको बुद्धि भुट्ने, ठग्ने, पकाउने, खाने मात्रै देखिएका छन् ।
त्यसपछि हिनियस क्राइमहरु । लुटपाटका घटनाहरुदेखि हत्या, रेप त्यसपछि लागुऔषधकर्ता, लगायतका हिनियस क्राइमहरु पनि काठमाडौंमा छन् । र, समष्टिगत रुपमा भन्दाखेरी धेरै प्रकारका अपराधी छन् । यसको पुलिसिङ राम्रो भयो भने हाम्रो इमेज राम्रो बन्छ । देश राम्रो बन्छ । त्यसैले पुलिसको इमेजले सम्पूर्ण नेपालको शान्ति सुरक्षाको इमेज पनि दिन्छ । र हामी धेरै महत्वपूर्ण पुलिस हौं काठमाडौंमा । हाम्रो विशेष दायित्व छ । र, नेपाल पुलिसलाई एकदम जनमैत्री पुलिस चुस्त दुरुस्त संगठन देखाउनका लागि पनि काठमाडौंको पुलिसले काम गर्नुपर्छ ।
तपाईको विचारमा सुधार गर्नुपर्ने प्रहरी संगठनभित्र । जस्तै लामो समयदेखि सरुवा बढुवाका लागि दुर्गम गाउँमा राजधानी काठमाडौं आउनुपर्ने अवस्था छ सेवा सुविधाका लागि । अझै सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु के देख्नुभएको छ ?
मेन मैलै एउटै समस्या के देख्छु भने हाम्रो बानीमा परिवर्तन जरुरी छ । अहिले पनि पुलिसको बोलीबचन सामन्ती शैलीको छ । थर्काएर बोल्ने, झपारेर बोल्ने, एकदम ठूलो स्वरमा बोल्दा त्यो कडा अफिसर हो कि भन्ने मानसिकता जुन छ मैले आजको विफ्रिङमा त्यही भने यो नितान्त अब गलत मानसिकता हो । अबको जमानामा यो मोडालिटीको पुलिसङ र यो स्टाइलको पुलिस अफिसरलाई राम्रो मानिदैन्, र त्यो कडा होइन् । त्यो कमजोर, विक्षिप्त मानसिकताको मनोवैज्ञानिक रुपमा कमजोर भएको अफिसरले त्यस्तो गर्छ । अब शक्तिशाली, व्यवसायिक र कडा अफिसरले नरम र सभ्य शिष्ट भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यो अफिसर कडा हो ।
हामी प्रहरीबाट यस्तो भएन उस्तो भएन भन्छौं, तर प्रहरी आफै कति सक्षम छ ?
त्यो त आन्तरिक समस्या स्वभाविक हो । अब विकासन्मुख देशको, गरिब देशको प्रहरी संगठन धेरै साधन स्रोतको व्यापक अभाव छ । त्यो पीडा त आफ्नो ठाउँमा छदैछ । त्यसका बाबजुद पनि जे मौजुदा परिस्थिती छ त्यसैमा हामीले म्याक्सिमम सेवा कसरी दिनसक्छौं त्यति मात्रै सोच्ने हो । साधन स्रोत दिने कुरा मेरो वशको कुरा होइन्, त्यो त संगठन प्रमुखमार्फत राज्यले दिने कुरा छ । राज्यले पनि मागे जतिका साधनस्रोत दिने हैसियतमा राज्य पनि हुन सक्दैन् । त्यो अभाव त हामीसँग अझै वर्षाै रहिरन्छ ।
अन्तिममा काठमाडौंबासीलाई के भन्न चाहन्नुहुन्छ ?
म भन्न चाहन्छु, अब प्रहरी तपाईकै घरआँगनमा छन् । प्रहरी तपाईको साथी हो । अन्याय नसहनुस् । प्रहरीमा तुरुन्त खबर गर्नुस् । हामी सिधै एक्सन लिनेछौं । अबको प्रहरी सच्चिएर आएको छ । त्यसकारण अब जनता र प्रहरी हातेमालो गरे अगाडि बढनुपर्छ । समाजका विकृति, विसंगतिको सफाया गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रहरीमाथि भरोसा र विश्वास गर्न आग्रह गर्दछु । दैनिकनेपाल
सुरज थापा भन्छन्– नेपाल आइडलको फाईनलमा प्रताप दास र सागर आलेलाई हेर्न मन छ (भिडियो सहित )
यी हुन मान्छेको मासु काँच्चै खाने ब्यक्ति, जसलाई “टाईगर बाबा” भनेर चिनिन्छ ( भिडियो सहित )
हाँस्य कलाकार राता मकै..बिल गेट्स भन्दा धनी